လျှံကျခဲ့တဲ့ စကားတချို့ (၂) (ဝါ) ဒီမိုကရေစီ အက်ကြောင်းရှာပုံတော်
မြန်မာနိုင်ငံက စိတ်ကြွဆေးပြား ၄ သန်းခွဲ ဘန်ကောက်မှာဖမ်းမိ။
Note to the editor:Karen New Year celebration is taking place on 30th December 2010 following the European Karen Conference and it is organised by the Karen Community Denmark. ﻿
At European Karen Network Conference, Denmark 28-29 December 2010.At European Karen Network Conference, Denmark 28-29 December 2010.
ဧရာဝတီ Thursday, 23 December 2010 18:49 ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နယ် ဖလူးဒေသတွင် တပ်စွဲထားသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) ဗျူဟာ (၁) နှင့် ဗျူဟာ (၂) တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ချေမှုန်းရန် ထိုင်းနိုင်ငံ တဖက်ကမ်းမှ တဆင့် ၀င်ရောက်လာမည့် နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင် (၅၀) ခန့်ကို ယမန်နေ့ညက လက်ဦးမှုယူ၍ DKBA က တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ DKBA ဗျူဟာ(၁)မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်သက်က"ဖလူးရွာမှာ အခြေစိုက် တပ်က အင်အား(၅၀) မနေ့ည(၈)နာရီမှာ ထိုင်း ဘက်ခြမ်း မဲဆောက်အပိုင် မဲ့ကိုကင်းရွာကနေ ကူးပြီး ကျနော်တို့ကို တိုက်ဖို့ ဆင်းလာတာကို သိလို့ ပြန် တိုက်ထုတ် လိုက်ရတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ယင်းတိုက်ပွဲကြောင့် နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦး ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု သိရသော်လည်း မည်သည့် တပ်မှ ဖြစ်ကြောင်းကိုမူ အတိ အကျ မသိရှိရသေးပေ။
နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ၀င်ရောက်မည့် အစီအစဉ်မှာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ ခွင်ပြုချက် မရဘဲ ၀င်ရောက် ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိကြောင်း၊ အလားတူ ၀င်ရောက်မှုမျိုးကို ယခင်က ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ခွင့်ပြုခဲ့ဖူးကြောင်း DKBA တပ်မှူး တဦးက ပြောသည်။ မဲဆောက် အခြေစိုက် အမှတ်(၄) ဒေသဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲရေး တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူပါချို့ထ၀ပ်ဖိလာချိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှ မည်သည့်လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကိုမဆို ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အခြေချ လုပ်ရှားခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ တွေ့ရှိ ပါက ဖမ်းဆီး အရေးယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ သတင်းထောက်များကို ပြောကြားထားသည်။ ထို့အပြင် ထိုင်းပြည်သူများ လေးစားကြည်ညိုသော အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တဦး ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ခရီးစဉ်ရှိသည့် အတွက် DKBA နှင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်များက နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းများကို ခေတ္တရပ် နားဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။ အတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းများအရ ထိုင်းဘုရင့် သမီးတော် မဟာချက်ကရီ သီရိဒုံ မင်းသမီး ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် သို့ ယခု လကုန်ပိုင်းတွင် အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်သက်က"ဒီခရီးစဉ်ရှိတဲ့ အတွက် ဒီရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ ကျနော်တို့ဘက်က ဘာစစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုကိုမှ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီအရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကျနော်တို့လည်း လေးစားပြီးသားပါ၊ နအဖ ဘက်ကသာ လေးစားအားနာရ ကောင်းမှန်း မသိဘဲ အရင်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဘက်က သင့်တင့်တဲ့ နည်းတမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုင်တွယ်သွား ရမှာ ဖြစ်တယ်"ဟု ဆိုသည်။
<a target='_blank' href='http://ads.protore.net/www/delivery/ck.php?n=4ba2ecd'><img border='0' alt='' src='http://ads.protore.net/www/delivery/avw.php?zoneid=34&n=4ba2ecd' /></a> Posted by
ကျော်ခ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၃၈ မိနစ် ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ပြောက်ကျားတပ်များနှင့် စစ်အစိုးရတပ်များ မနေ့ မနက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကေအင်ယူ ဘားအံခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောအောင်မော်အေးက ပြောသည်။ ကေအင်ယူနယ်မြေ မာနယ်ပလောသို့ အင်အား ၂ဝဝ ကျော်ဖြင့် ချီတက်လာသော စစ်ဆင်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဌာန ၁၉ လက်အောက်ခံ ခမရ ၁ဝ၆ နှင့် ၆၁ တပ်ရင်း ၂ ရင်းကို အင်အား ၂ဝ ကျော် ပါဝင်သည့် KNU တပ်မဟာ ၇ လက်အောက်ခံ ၂ဝ၂ ပြောက်ကျားတပ်များက မနေ့ မနက် ၇ နာရီက တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ပြောက်ကျားတပ်များက မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်များ၊ RPG၊ AK 47 နှင့် ဆွဲမိုင်းများ အသုံးပြု၍ ချုံခို တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် စစ်အစိုးရတပ်မှ တပ်ကြပ်ကြီး တဦး၊ တပ်ခွဲမှူးတဦးနှင့် တပ်သား တဦး ကျဆုံးသွားပြီး တဦး ဒဏ်ရာ ရရှိသည်ဟု ပဒိုစောအောင်မော်အေးက ပြောသည်။
“စစ်တပ်က ဒီနယ်မြေကနေပြီး KNU ကို အပြီးမောင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။ ကျနော်တို့ကလဲ ကိုယ်ရပ် တည် ရှင်သန်ရေးအတွက် အဲဒီကိစ္စအပေါ်မှာ လက်မခံနိုင်တော့ အပြန်အလှန်ရင်ဆိုင် တိုက်ကြတဲ့သဘောပါ” ဟု KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ ထို့အပြင် မနေ့က ကော့ကရိတ်ခရိုင် ကျုံဒိုးမြို့နယ် လို့လဲ့ ဒေသ တွင် ခမရ ၅၈၈၊ ၄ဝ၈ တို့နှင့် အပစ်ရပ်ပျက်ပြားသွားသော DKBA ဗိုလ်မှူး ဘငြိမ်း ဦးဆောင်သည့် ၉ဝ၂ တပ်ဖွဲ့များ ရင်ဆိုင်တိုက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဒီကေဘီအေ ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ ဗိုလ်မှူး ချစ်စရာက မဇ္ဇျိမကိုပြောသည်။ ၂ ဘက်လုံးတွင် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိသော်လည်း DKBA နှင့် KNU ကရင်တပ်များကို ချေမှုန်းရန် စစ်တပ်မှ ပြင်ဆင်နေသဖြင့် တိုက်ပွဲများ ထပ်ဖြစ်လာဦးမည်ဟု သူကဆက်ပြောသည်။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှစ၍ တလကျော်အကြာဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်မှ ဒေသခံ ၃ဝဝဝ ကျော် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်၊ ဖုတ်ဖရာ့မြို့နယ်နှင့် အုန်းဖန်တို့တွင် လာရောက် စစ်ဘေးခိုလှုံနေကြကြောင်း ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးနေသည့် မယ်တော်ဆေးခန်းမှ သိရသည်။ “အခုဟာ ဒုက္ခသည်တွေက များလာတော့ ချက်ပြုတ်ကျွေးလို့မနိုင်တော့ဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် တပတ်တခါ ရိက္ခာခြောက်တွေကို လူဦးရေအလိုက် ကျနော်တို့က လိုက်ပြီး ဝေပေးနေတယ်လေ” ဟု ဒုက္ခသည်များကို အကူညီပေးရာတွင် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကိုနေဦးက ပြောသည်။
ထိုင်းအာဏာပိုင်များထံ ခိုလှုံခွင့်တောင်းလျှင် စစ်ငြိမ်သွားချိန်တွင် ချက်ချင်းပြန်ပို့မည် စိုးသဖြင့် ဒုက္ခသည်များ လယ်ထဲ ချောင်းနားတွင် မိုးကာစများခင်း၍ ခိုလှုံနေကြရ၍ ရာသီဥတု အအေးဒဏ်ကိုခံနေရကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။ တိုက်ပွဲနယ်မြေများတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက စစ်တပ်အင်အားများ တိုးချဲ့စေလွှတ်နေသဖြင့် နယ်စပ်တလျောက် တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့် မြန်မာဘက်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေပြေးလာလျှင် စောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်ဖို့အတွက် ယာယီရွက်ဖျင်တဲများ၊ အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း၊ အစားအသောက်၊ သောက်ရေသန့်၊ ဆေးဝါးတို့ကို ပြင်ဆင်ထားဖို့ ထိုင်းနယ်စပ်တလျောက် မြို့ပိုင်တွေကို ညွန်ကြားထားကြောင်း တာ့ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နိုင်စမတ် လွိုင်ဖားက ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းဌာနကို ပြောဆိုထားသည်။
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement In Karen Language - Posted by
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement In Burmese Language - Posted by
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement - Posted by
ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)ကရင်ပြည်နယ် ဝေါ်လေဒေသနှင့် ချူကလီးဒေသဘက်တွင် နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေတို့ကြား တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား ခဲ့ရာ တိုက်ပွဲအခြေအနေမှာ ယနေ့အထိ ပြင်းထန်လျှက်ရှိသည်ဟု ကေအိုင်စီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
2010-12-09ကရင်ပြည်နယ် ဝေါလေဒေသမှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ဒီကေဘီအေ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော်ဖက်ကို ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက် မနေ့က ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF) တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပူးပေါင်း အင်အားဖြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ (Courtesy of MoeMaka)မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) မှ တပ်ဖွဲ့တခုကို တောတွင်းတနေရာတွင် တွေ့ရသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Courtesy of MoeMaka) စစ်မှန်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဖြစ်ဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသား တန်းတူအခွင့်အရေး ရဖို့ ဒီကေဘီအေရဲ့ ခုခံစစ်ကို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ ပူးပေါင်းတာ ဖြစ်တယ်လို့ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသံခဲက ပြောပါတယ်။ “ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ်တို့ နအဖအပေါ်မှာ တန်ပြန် တော်လှန်တိုက်ပွဲဆင်တာဟာ အခုဆိုရင် တလပြည့်ပြီ။ ဒီတလပြည့်တဲ့ အချိန်ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတပ်မတော် အနေနဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ရတယ်။ နောက်တခုကတော့ KNLA ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရတယ်။ နားလည်မှုတွေ ယူပြီးမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ တင်ပြလိုပါတယ်။” ပြီးခဲ့တဲ့လက ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မြဝတီမြို့ကို ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့တွေ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နအဖနဲ့ ဒီကေဘီအေတပ်တွေ နေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာတာ တလနီးပါး ရှိပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ ဒီကေဘီအေကို နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ စစ်အစိုးရက ဖိအားပေးရာကနေ အခုလို နယ်စပ်တလျှောက် တိုက်ပွဲတွေ အရှိန်မြင့်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
RFA Posted by
Bangkok, 09 December, (Asiantribune.com): Kraisak Choonhavan MPKraisak Choonhavan MP and the deputy leader of Thailand’s ruling Democratic Party has appealed to stop pressuring Burmese refugees into returning home until and unless it has been confirmed by all fighting parties that the fighting has ended. Inaletter regarding Burmese refugees protection and assistance in Thailand addressed to Director of Border Affairs Department, Royal Thai Armed Forces, Kraisak Choonhavan who is also Chair of the Thai national caucus, ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus has pointed out that it has been reported that Burmese refugees in Mae Sot and Pop-Phra, Tak Province, have been pressured by representatives of the Royal Thai Army into returning to Burma and that they have been told that fighting has ended. He further pointed out that “In fact, the fighting is still ongoing and such returns are premature. Asaresult, people have had to flee repeatedly to safety, while some have gone into hiding in Thailand out of fear of being repatriated. The letter which has also been copied and sent to Thai Prime Minister, Foreign Minister, Supreme Commander, Army Chief and Third Army Commander-in-Chief, Thai MP Kraisak Choonhavan has called on the Department of Border Affairs to establishacooperative mechanism between government agencies, international and local organizations to assess the situation, develop contingency plans, provide humanitarian assistance to refugees and develop standard principles for repatriation and for assistance during and after repatriation. The letter went on to urge the importance of the protection and assistance to Burmese refugees on Thai soil. "It further revealed that since the election took place in Burma on7November 2010, there has beenagreat amount of instability and violence in the border areas between Burma and Thailand. Fighting between the State Peace and Development Council (SPDC) and ethnic non-state armed groups in Burma has assumed extraordinary proportions. Accordingly, “Several thousand refugees fled into Thailand asaresult of the eruption of fighting on and after Election Day, while sporadic fighting since then has displaced communities along the border several times. Civilians in Burma are entitled to protection under international humanitarian law as long as the conflict continues. However, such reports indicate that this is currently not being respected by either party to the conflict. Kraisak Choonhavan continued to insist: “As an elected Member of the Thai parliament, I am deeply concerned about the situation of these refugees on Thai soil. According to information received, the provision of humanitarian aid and the process of repatriation of recent refugees from Burma do not abide by international humanitarian and human rights standards. Several local and international organizations have criticized Thailand for not living up to our international obligations. “Although the Royal Thai Government has stated that there will be no enforced repatriation of refugees until the situation stabilizes, it has been reported that refugees in Mae Sot and Pop-Phra, Tak Province, have been pressured by representatives of the Royal Thai Army into returning to Burma and that they have been told that fighting has ended. In fact, the fighting is still ongoing and such returns are premature. Asaresult, people have had to flee repeatedly to safety, while some have gone into hiding in Thailand out of fear of being repatriated. “While Thailand is notastate party to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Thailand has an obligation under customary international law of non-refoulement of persons to places where their life or freedom is at risk. International law also obliges Thailand to allow asylum seekers access to Thai territory to seek asylum. "I have followed the situation in Burma for many years. In my opinion, there will be no easy or immediate solution to the current conflict situation. Under such circumstances, it is imperative that refugees from Burma be given temporary shelter on Thai soil until the fighting has really been brought to an end and they are convinced it is safe to return to Burma. This is also the only solution that will prevent Thailand from being criticized for failing to live up to international humanitarian and human rights principles," emphasised Kraisak Choonhavan. - Asian Tribune -
Posted by နေ့သစ် on December 9th, 2010 dkbaဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နဲ့ ၈ ရက်နေ့မှာ ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖတို့ ဖလူး ဒေသမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ပြီး ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ နအဖ စစ်တပ်တွေ နေရာယူထားတောင်ကုန်းကို ဒီကေဘီအေ ဘက်က တက်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
December 8th, 2010 ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၈ ၂၀၁၀ ည ၉း၀၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ကျောင်သားတပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ ၀င်များနှင့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က ဝေါလေဒေသ အ တွင်းရှိ နအဖ တပ်စခန်း တခုဖြစ်သော သုခမြိုင် တံတားစခန်း (ရွှေမုတ်စခန်း) အား ည ၉း၃၀ မိနစ်တွင် တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယခုသတင်းရေးသားချိန်တွင် နီးစပ်ရာ နအဖ စခန်းနှစ်ခုကိုလည်း ဆက်လက်သိမ်းပိုက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။ (ABSDF)
နော်အဲဏီ၊ ကောင်းဝါနတ်တော်လဆန်း ၂ရက်။ဒီဇင်ဘာ ၈၊၂၀၁၀။ နော်အဲဏီ(ဒီဇင်ဘာ-၈)။ ။ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နယ်ရှိ တပ်ခေါ်ကျိုးတောင်တန်းကိုရောက်နေသည့် စစ်အစိုးရစစ်ကြောင်း၏ ရှေ့ပြေးတပ်တစ်ချို့ကို ဒီကေဘီအေဗျူဟာ (၁) မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်သက်အဖွဲ့က ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီး စစ်အစိုးရဘက်မှ(၁၀) ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်သက်မှပြောပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၇ရက်။ နန်းထူးစံ (ကေအိုင်စီ)ပြီးခဲ့သည့် လကုန်ပိုင်းက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ကေအဲန်ယူ/ကေအဲန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ၆ဦး၏အ လောင်းကို ယနေ့မနက်တွင် ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီခရိုင်၊ ပလောတပို့ရွာနှင့် မနီးမဝေး ပြောင်းခင်းတခင်းတွင် ဒေသခံရွာ သားများက တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့မနက် ၉နာရီအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီခရိုင်ရှိ ဖလူးကလေးဒေသအတွင်းရှိ ဗိုလ်မှူးတဲခီး ဦးစီးသော ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို နအဖ ခမရ(၂၄၀)တပ်ဖွဲ့က ၀ိုင်းပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တပ်သား ၁ဦးကျဆုံးကာ ၆ဦးမှာ အဖမ်းဆီးခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကေအဲန်ယူ/ကေအဲန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ စစ်ထောက်ချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောရင်နုက “ရွာသားတွေ ကျနော်တို့ကို ပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့လူတွေ နအဖက သတ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ယခုလဆန်း ၂ရက်နေ့က ကျနော်တို့ သိရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နအဖ တာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးတော့ ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီလို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့လူတွေ သူတို့ကို ဘာမှသွားလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ဒီလိုလုပ်တာ မကောင်းဘူး။ ဒါ ကျနော်တို့အပေါ် သက်သက် ညှင်းဆဲတာ ပဲ။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
<a href="http://www.geovisite.com/zoom.php" target="_blank"><img src="http://geoloc15.geovisite.com/private/geocounter.php?compte=617541965391" border="0" alt=""></a><br> Please do not change this code foraperfect fonctionality of your counter <a href="http://www.geovisite.com/">widget</a> Posted by
စစ်အစိုးရနှင့် DKBA တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ် သန်းထိုက်ဦး Monday, 06 December 2010 17:24 စစ်အစိုးရတပ်နှင့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မြ၀တီမြို့နယ် အတွင်းရှိ မေတ္တာလင်းမြိုင်ဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ ကြောင်းသိရသည်။ မြဝတီ မြို့နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA တပ်များ တိုက်ပွဲ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေသောကြောင့် ဒုက္ခသည်များလည်း ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ပြေးဝင် ခိုလှုံနေရဆဲဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)မေတ္တာလင်းမြိုင်ဒေသ၌ ယနေ့ နံနက် ၅ နာရီခန့်တွင် နအဖ စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများဖြင့် အချက် ၂၀ ခန့် ပစ်ခတ် ကြောင်း ယင်းကျေးရွာအနီးရှိ ဒေသခံများက ဆိုသည်။ ယနေ့တိုက်ပွဲများကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများ မရှိသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့မှ စတင်၍ ထွက်ပြေးလာသူ လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော် ရှိနေသေးကြောင်း၊ ထွက်ပြေးလာသော စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို ထိုင်း အာဏာပိုင် များက ထိုင်းနယ်ခြားစောင့် စခန်းဝန်းအတွင်း စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်း ဒုက္ခသည်များကို ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဒုက္ခသည်များ ထားရှိရာသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး အလျင်စလို ပြန်ပို့ရန် မလိုအပ်သေးကြောင်းနှင့် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အခြေအနေ ရှိနေသေးကြောင်း ပြောသွားသည်ဟု သိရသည်။ ထွက်ပြေးလာသော ကရင်ရွာသားများကို မဲဆောက်မြို့ရှိ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသော NGO အဖွဲ့ အစည်း တချို့က အစားအသောက်များ ကူညီထောက်ပံ့ပေးထားသည်ဟု မဲဆောက်မြို့ခံများက ဆိုသည်။ ထို့အပြင် နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပေးရောက်ရှိလာသော ဒုက္ခသည် များကို အချိန်မတန်သေးဘဲ ပြန်မပို့ရန် လူ့အခွင့်အရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး (HRW) အဖွဲ့က ထိုင်း အာဏာပိုင်များအား ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က တောင်းဆိုထားသည်ဟု သိရသည်။ HRWမှ အာရှရေးရာ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆိုဖီ ရစ်ချတ်ဒ်ဆန်က “မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲမှာ အရပ်သားတွေကို ထိခိုက်မှု မရှိအောင် နှစ်ဘက်လုံးက အလေးထားတာမျိုး မပြခဲ့ဘူး”ဟု ဆိုသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် မြ၀တီမြို့နယ် အပါအ၀င် ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်နှင့် ကြာအင်း ဆိပ်ကြီးမြို့ နယ်များတွင် စစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA တပ်မဟာ ၅ တို့ တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် နေ့စဉ်နီးပါး တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
“ရန်သူ (နအဖ တပ်တွေ) က အဲဒီဘက်တွေမှာ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ DKBA ကလည်း မညီညွတ်တော့ဘူး ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဘက်က ပျောက်ကျားစနစ်နဲ့ လစ်တာနဲ့ ထတိုက်မှာပဲ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။ ပျောက်ကျား တပ်များကို အဆိုပါဒေသများသို့ ထပ်မံ တိုးချဲ့ရန် ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ထို့အပြင် KNU လက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ (၅)၊ တပ်မဟာ (၇) လက် အောက်ခံ တပ်ရင်း (၂၀၂)၊ တပ်ရင်း(၂၂) တပ်များပူးပေါင်းကာ လှုပ်ရှားနေကြောင်းလည်း KNLA အသိုင်းအ၀န်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထားသော နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင် အများစုက ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် လကုန်ပိုင်းတွင် လက်ခံ ခဲ့ကြသော်လည်း ဗိုလ်မှူးကြီး စောလားပွယ် (ခေါ်) ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး၏ တပ်ဖွဲ့ကမူ ယင်း အစီအစဉ်ကို သဘောမတူ သောကြောင့် ခွဲထွက်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး စောလားပွယ် တပ်ဖွဲ့သည် ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်များတွင် လှုပ်ရှားနေသော တပ် ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ DKBA သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) မှ ခွဲထွက်ပြီးနောက် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲကာ တဖြည်းဖြည်း အင်အား ကြီးမားလာသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။
Need to Know Enemy for Unity Posted by
မဲန်ဒဲလား ထောင်သက် ၂၇နှစ်ကျော်၊ လွတ်။ ကရင်ရဲဘော်လေး တူးကီ ထောင်သက် ၂၈ နှစ်ကျော်၊ နေဆဲ။ နယ်လ်ဆင်မဲန်ဒဲလားက ထောင်ထဲမှာ ၂၇နှစ်ကျော် နေခဲ့ရတယ်။ ထောင်ထဲ နှစ်ရှည်နေရတာကြောင့်ရော၊ သူ့ရဲ့ လေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ရော ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တယ်။ ကရင်တော်လှန်ရေး ရဲဘော်လေး တူးကီ ခေါ် ခင်မောင်လင်း ထောင်ထဲ ရောက်နေတာ ၂၈ နှစ် ကျော်လာပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒါကို အလွန် လူသိနည်းလှပါတယ်။ သူ့သက် ၂၀ မပြည့်သေးချိန် ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ စတင် အကျဉ်းချခံရတာပါ။ နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုနေသလို ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် လွတ်မြောက်လာရင်တော့ တူးကီလည်း လွတ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ဝင်လိုက်ကြ ထွက်လိုက်ကြနဲ့ ရှိနေပေမယ့် မန်းငွေအောင် အမှုတွဲ တူးကီကတော့ အိမ်ရှင် အကျဉ်းသားကြီးဖြစ်လို့ ဧည့်သည်တော်များကို တယောက်ပြီးတယောက် ဧည့်ခံနေရသူပါ။ အာဟာရမဲ့ ခြုံပုတ်ပြုတ်ရည်၊ ဒေါက်၊ ခြေကျင်းနဲ့ ကျားတွေ ခြသေ့င်္တွေလို နှစ်ရှည်လများ တိုက်ပိတ်၊ တနေ့ကို ၁၀ မိနစ်လောက် မြေကြီးနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရ ဆိုတာတွေဟာ တူးကီရဲ့ ထောင်သက်၂၈နှစ်ကျော် မှတ်တမ်းတွေပါပဲ။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် အင်းစိန်ထောင်ကနေ ရက်စက်ပူပြင်း သရက်ထောင်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီး လွတ်ရက်လည်း မသိ၊ တူးကီ လွတ်မြောက်ရေး ဆိုပြီး သီးခြား တောင်းဆိုတာလည်း မရှိသေးလို့- ကရင့်တော်လှန်ရေး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တူးကီကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါလို့ ဒီကနေ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တူးကီ နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး ချက်ခြင်းလွှတ် ဘဝတူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ရဲဘော်http://ppmoemaka.blogspot.com/ Posted by
မင်းချမ်း၊ ကောင်းဝါ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၁၄ရက်။ဒီဇင်ဘာ ၅၊၂၀၁၀။ မင်းချမ်း(ဒီဇင်ဘာ-၅)။ ။ ဘုရားသုံးဆူ၊ ထိုင်းနယ်မြေကိုဝင်ရောက်လာသော မြန်မာစစ်အရာရှိနှစ်ဦးတို့သည် ဗျူဟာမှူးသတင်းသိရှိသွားသဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးဂတုံးတုန်းရိပ်ကာ အပြစ်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူအမည်မဖေါ်လိုသူတစ်ဦး ပြောသည်။
ထိုင်းနယ်စပ်ရောက် မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ တပ်ပြေးဝင်ရောက်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ ယခုအခါ မဟာချိုင်ဒေသတွင် မြန်မာတပ်ပြေးများ ထောင်ဂဏန်းအထိပင်ရှိနေကြောင်း သတင်းများတွင်ရေးသားဖေါ်ပြကြသည်။ Posted by
နော်အဲဏီ၊ ကောင်းဝါ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၁၄ရက်။ဒီဇင်ဘာ ၅၊၂၀၁၀။ နော်အဲဏီ(ဒီဇင်ဘာ-၅)။ ။ နအဖတပ်များနှင့်ဒီကေဘီအေတပ်များ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း၌မြ၀တီမြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများဆက်လက် ဖြစ်ပွါးနေဆဲဟုဒီကေဘီအေတပ်မှူးတစ်ဦးမှပြောပါသည်။ ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့များ မြ၀တီခရိုင်၊ ဝေါ်လေကျေးရွာတွင် စခန်းချနေသော နအဖတပ်ကို ဒုတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးစောချမုစေး ၊ တပ်စုမှူးစောလှခိုင် ဦးဆောင်သော ဒီကေဘီအေ(၉၀၉) တပ်နဲ့ ကေအဲန်ယူ တပ်ရင်း (၂၀၁)က ပူးပေါင်းပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့ ည (၁၁း၃၀) အချိန်တွင် (၁၅)မိနစ် ခန့် သွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ဒုတပ်ရင်းမှူး စောချမုစေးက ပြောပါသည်။
မြန်မာပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေသောစစ်အာဏာရှင် (ပုံ-ခင်မောင်ဝင်း၊ အေဗီ) ထို့အပြင် ယခုထိုးစစ်ဆင်နေသော နအဖတပ်များ အနေ နှင့် စစ်ကူအင်အားနည်းသဖြင့် ရိက္ခာမပံ့ပိုးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းပြောပါသည်။ ဒီကေဘီအေမှလည်း ဤအချက်ကို အကြောင်းပြု၍ ကြားဖြတ်ထိုးစစ်ဆင်နေပါသည်။
သို့သော်လည်း ယခု အစိုးရတိုက်တွန်းထားသော နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို လက်မခံ သည့်ဒီကေဘီအေအဖွဲ့မှ မဟုတ်ဟုသိရပါသည်။ Posted by
Thai troops are seen escorting refugees who escaped fighting in November toashelter in Mae Sot (Reuters) Reports are emerging that suggest the Thai army is blocking refugees from escaping conflict in eastern Burma and ordering those that had fled across the border to return.